कसरी आउँछ डण्डिफोर ? डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित ? - ज्ञानविज्ञान
कसैलाई पनि आफू कुरुप देख्खिने इच्छा हुँदैन । तरपनि युवायुवतीहरू ऐना अगाडि उभ्भिन्छन् र यत्रो ठूलो डण्डिफोरले उसैलाई एकोहोरो हेरिरहेको देख्छन् । निचार्नुहुँदैन भनेर सबैले भनेको सुनेकै हो, तरपनि निचार्छन्, फुटाउँछन् अनि आँखा र छाला रातो नहुञ्जेलसम्म चिमोटिरहन्छन् । उनीहरूले एकपटक पनि सोँच्दैनन् कि त्यसरी निचार्नु भनेको छालालाई अत्याचार गर्नु हो ।
कसरी आउँछ डण्डिफोर ?
युवावस्थामा अधिकांशलाई सताउने छालाको साझा दोष हो- डण्डिफोर! विश्वभरीका ८०% भन्दा बढि युवायुवतीहरूले डण्डिफोरको पीडा सहने गर्छन्। हुन त प्रौढ अवस्थामा पनि थुप्रै कारणले गर्दा डण्डिफोर आउने गर्छ, जस्तै; एण्ड्रोजेन नामक हरमोनमा असन्तुलन ।
हाल डण्डिफोरको बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भैरहेका छन्, तरपनि यसको ठेट कारण भने अझसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर डण्डिफोर आउनु पनि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीकै कारण हो । हाम्रो छालामा हुने सूक्ष्म प्वालहरू जब बाहिरको धुलो र ब्याक्टेरियाले टाल्लिन्छ, तब त्यस प्वालमा हुने तेल निकाल्ने सबासियस ग्रन्थि पनि टाल्लिन जान्छ ।
जसको कारण ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गराउन सुरु गर्छ । यहि ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरभित्र पस्न नपाओस् भनेर सेता रक्तकोषहरूले छेकेर बस्ने गर्दछन् र ती ब्याक्टेरियाहरूलाई बाहिर निकाल्न खोज्छन् । यसै कारण नै कुनै-कुनै डण्डिफोरको टुप्पामा कालो खिल देखिन्छ ।
डण्डिफोर भनेको छालामुनि भएको एउटा सानो झोलाजस्तै हो, जसमा चिल्लो पदार्थ, ब्याक्टेरिया अनि जलन गराउने तत्व रहेको हुन्छ । यसलाई निचार्दा झोलाभित्र भएका सबै तत्वहरू छाला बाहिर निस्कन्छन् र बाहिरको छालामा सङ्क्रमण पनि हुन सक्छ । यसले झन् नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ ।
साथै, डण्डिफोर निचारिसकेपछि त्यसले झन् बढि जलन गराउन सक्छ र छालामा कालो दाग पनि बस्न सक्छ । र यो दाग डण्डिफोर जस्तो होइन, यो त सँधेको लागि पनि बस्न सक्छ ।
फेरि डण्डिफोर निचार्दा नङमा भएको ब्याक्टेरिया र अन्य फोहोरको कारण अझ बढि सङ्क्रमण हुन जान्छ ।
यदि तपाईँले डण्डिफोर निचार्ने इच्छालाई दबाएर राख्न सक्नुभयो भने त्यो १ हप्ताभित्र आफै हराएर जान्छ, दाग नै नराखीकन। कुनै डण्डिफोर पाकिसकेपछि आफै फुटेर जान्छ ।
कसरी बच्ने डण्डिफोरबाट ?
डण्डिफोर आउनुमा धेरै कुराको भूमीका हुन्छ । अनुहारमा लगाउने क्रिम, साबुन तथा फेसवासले पनि तपाईँको अनुहारको छालामा डण्डिफोर निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।
साथै बढि चिल्लो खाद्यपदार्थको सेवनले समेत कसै-कसैको छालालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आफूलाई के-कुराले डण्डिफोर ल्याउँछ विचार गर्नुपर्छ र त्यसबाट बच्नुपर्दछ। त्यसलगायत डण्डिफोरबाट बच्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
Don't Miss it कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ?
Up Next पटक-पटक पिसाब किन आउनुछ, यस्त छन् कारण जानिराखौँ